Ihowuliseyili Blutooth e pricer ileyibhile yexabiso kwithegi yelebheli yenkqubo yeelektroniki iivenkile zomenzi kunye nomthengisi | Zkong
I-Blutooth e pricer ilebula yexabiso kwithegi yelebheli yenkqubo yeelektroniki yeevenkile zeelctronics
Igama lebrand: Zkong
-Igama: Blutooth e pricer ilebula yexabiso kwithegi yelebheli yenkqubo yeelektroniki iivenkile zeelctronics
Ubukhulu: 2.66 ″
-Olunye ubungakanani: 1.54 ", 2.13 ″, 2.7 ″, 2.9", 4.2 ", 5.8 ″, 7.5" 11.6 ", 13.3 ″
Ulwimi: IsiTshayina, isiNgesi, isiPolish, iSpanish, isiRashiya, isiJapan, isiThai, isiArabhu, njl.
-Bomi bebhetri: iminyaka emi-5
-Display: mhlophe, mnyama, bomvu / mthubi
Ubushushu bokuSebenza: 0 ~ 45 ℃
-Iziqinisekiso: ISO / CE / FCC / ROHS njl
-Umsebenzi: umboniso wolwazi, ukukhanya kwe-LED, i-NFC, ulawulo lwevenkile njl
I-Blutooth E yeLebhile yeLebhu yexabiso leTekhnoloji yokuPhawula i-Elektroniki yeeVenkile
Isisombululo sokubhalwa kweelelufu se-Zkong (ESL) sikunceda ukuba ugcine ixesha ngohlaziyo lwamaxabiso oluzenzekelayo. Isebenza kakuhle ngakumbi kunephepha, kwaye iphucula amava abathengi bakho ngamaxabiso achanekileyo, athembekileyo. Iqhutywa sisisombululo sodidi lokwenyani sisebenzisa kuphela iserver enye, ukudibanisa iBluetooth, iWi-Fi kunye neetekhnoloji zekhompyuter yelifu, ezibonelela ngexabiso eliphantsi lobunini kunye nolawulo oluguquguqukayo. Akukho ziseva ziyafuneka kwivenkile ukuze kuqondwe lula nolawulo olusekwe kwilifu.
I-Zkong ESL inokutshintsha amaxabiso kunye neeproses kwishelufa enye ngobuchule, okanye kwizigidi, naphina, ngemizuzwana. Yazi amaxabiso akho achanekile, rhoqo. Ii-ESL zivumelanisa amaxabiso kunye nohlaziyo lolwazi ezivenkileni. Lichaze ngokuthe ngqo ixabiso lakho kwishelufa. Oku kuyakwehlisa iindleko zabasebenzi kunye nezo zinokuthenjwa, kuphuculwe iinkqubo zolawulo lwevenkile kunye nokunciphisa izikhalazo ezibangelwa ziimpazamo zexabiso
Ii-ESL ezinemizobo ngokupheleleyo zingasetyenziselwa ukuqaqambisa iiprosesa kwaye, kunye neelebheli zethu zeBluetooth, izibonelelo ezizezakho, ezibandakanya abantu kunye nezinomvuzo zinokuthunyelwa kwii-smartphones zabathengi ngokusekwe kukuziphatha kwabo kokuthenga-ukusuka kwimbali yokukhangela ukuya kuthengiso oludlulileyo. Ngaphezu koko, ungadibana neempawu ukukhuthaza iimveliso zabo kwiilebheli zakho, ukukhula kwemali engenayo kwii-shelf-edges eziya kuba zincinci, zibambe amehlo-kwaye zinenzuzo.
I-Zkong ESL nayo inokwakha ubuqu, ukusebenzisana kunye nokuzibandakanya amava evenkile. Nge-Intanethi yeZinto (i-IoT) ezinikwe amandla ii-ESLs, yenza iivenkile ezixhumeneyo kunye nokwenza ikhomputha yakho ibe yedijithali ukuze wenze iilebheli ezingenamda zotshintsho kwimizuzwana, kwaye wakhe amava obuqu, asebenzisanayo kunye nokuzibandakanya.
Ungaqhubeka nokudibanisa amava kunye nokugcina amava ngokubonisa idatha exabisa abathengi kwi-Intanethi, njengamaxabiso abakhuphisana nawo, amanqanaba esitokhwe, kunye nohlaziyo lwentlalo. Kwaye, ungabonisa naluphi na ulwazi-umzekelo: ixabiso ngeekilo, imvelaphi, ulwazi lokurisayikilisha nokunye okuninzi. Amava eBrand anokukhuthazwa, njengeendibano zocweyo zokupheka, iteknoloji 'indlela' yokukhokela kunye neeklasi zokomelela komzimba.
Yenza i-automate inkqubo yakho usebenzisa isisombululo sethu seZKONG Elektroniki yeshelf yokuBonisa isisombululo.
Isebenza njani i-ESL?
ESL Ngqamanisa neQonga leLifu
Zkong bonke ubukhulu 23 intshi 35 intshi 55 intshi 65 wolule LCD screen intengiso umdlali yedijithali imiqondiso touch screen ividiyo ukubonisa
1. Yintoni ebhalwe kwinkqubo yonke ye-esl?
Iqulunqwe ziithegi ze-ESL + izikhululo ezisisiseko + izikena ze-PDA + isoftware + izixhobo zokufaka i-ESL tags: 1.54 '', 2.13 '', 2.66 '', 2.7 '', 2.9 '', 4.2 '', 5.8 '', 7.5 '' , 11.6 '', 13.3 '', umbala omhlophe-mnyama-obomvu, isuswe ibhetri, isikhululo seSiseko: qhagamshela iithegi ze-ESL kuyo yonke inkqubo ye-PDA scanner: bopha iithegi ze-ESL kunye nezinto zorhwebo Isoftware: ukulawula inkqubo ye-ESL kunye nokuhlela iitemplate zokubeka izixhobo: uncedo Iithegi ze-ESL ezifakwe kwiindawo ezahlukeneyo
2. Yintoni itemplate yokubonisa?
Itemplate ichaza ukuba loluphi ulwazi oluya kuboniswa kwiscreen se-ESL kunye nendlela. Ngokwesiqhelo umboniso wolwazi ligama lezinto zorhwebo, ixabiso, imvelaphi, ikhowudi yebar, njl.
3. Template ungenziwa ngemfuneko?
Akukho sidingo sokwenza ngokwezifiso. Kuyabonakala ukuhlela itemplate, ngokufana nokuzoba nokubhala kwiphepha elingenanto. Ngesoftware yethu, wonke umntu uyilo.
4. Ukuba ndithenga iisampulu zovavanyo, yintoni endifanele ndiyiqwalasele?
Kukho iindlela ezimbini onokukhetha kuzo. a. Uhlobo olusisiseko: 1 * Isikhululo sesiseko + iithegi ezininzi ze-ESL + isoftware b. Imigangatho enye: 1 ibhokisi yedemo yekiti (zonke iintlobo zeethegi ze-ESL + 1 * isikhululo sesiseko + isoftware + 1 * Iskena sePDA + 1 iseti yeekhithi zokufaka + 1 * ibhokisi) * Nceda uqaphele ukuba isikhululo sesiseko siyimfuneko kuvavanyo. Iithegi zethu ze-ESL zinokusebenza kuphela kwisikhululo sethu esisisiseko.
Kuqala sixelele malunga neemfuno zakho okanye isicelo Okwesibini siza kukucaphula ngokolwazi lwakho Okwesithathu nceda wenze idipozithi ngekoteyishini uze usithumele ibhili yebhili Okwesine imveliso kunye nokupakisha kuya kulungiswa Okokugqibela thumela iimpahla kuwe
6. ixesha elikhokelayo?
Isampulu yoku-odola ihlala iyi-3-10 yeentsuku I-odolo ngokusesikweni ziiveki ezi-1-3
7. Njani ngesiqinisekiso?
Unyaka o-1 we-ESL
8. Ngaba uyabonelela ngeteknoloji yedemo ye-ESL yokuvavanya?
Ewe. Ikhithi yedemo ye-ESL iyafumaneka, ebandakanya bonke ubungakanani beethegi zamaxabiso e-ESL, isikhululo sesiseko, isoftware kunye nezinye izixhobo.
Egqithileyo Ixabiso leDijithali yeTeksi yeeleyibhile yamaxabiso eShelf yee-ESL zeevenkile zevenkile
Okulandelayo: Ixabiso lentengiso ye-Wireless Retail Tag Esl Label Digital Shelf Isithethi ngamaqondo obushushu asezantsi
Iimpawu zeeleyibhile zesiNtu
Iilebhile zexabiso ledijithali
Umthengisi weeleyibhile zeDijithali
Ileyibhile yeIink Shelf
Amanqwanqwa eelektroniki zeShelf Edge
Abavelisi beeleyibheli zeelektroniki
Ileyibheli yeshelf ekhompyutheni
Iileyibhile zeShelf Edge